thinzar's blog: Once uponaSaturday (၂)
အားလုံး ကစားမက်နေတာနဲ့ ဂိမ်းပြီသွားမှဘဲ နေ့လည်စာ လွတ်သွားတာကို သတိရကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဆာလောင်ခြင်း ကနေ ငတ်မွတ်ခြင်း stage ကို ရောက်နေကြပြီ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က KL က အကောင်းဆုံးဆိုင် ခေါ်သွားမယ်ဆိုတာနဲ့ လိုက်သွားတာ။ Cyberjaya အထိ ရောက်သွားတယ်။ အာရပ်အစားအသောက်တွေ ရောင်းတဲ့ဆိုင်။ ခေါ်သွားတဲ့တစ်ယောက်ကတော့ ဝေးဝေးသွားရကျိုး နပ်စေရမယ်ဆိုပြီးတော့ကို အာမခံထားတာ။ ဆိုင်အပြင်အဆင်ကတော့ ရိုးရိုးလေးပါဘဲ။ အစားအသောက်ကတော့ တကယ်ကောင်းတယ်။ lamb fan တွေဆို အဲဒီဆိုင်မှာ သွားစားသင့်တယ်။ ဆိုင်နာမည်တော့ မေ့နေတယ်။
အဲဒီဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာတစ်ယောက်နဲ့တောင် စကားပြောဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ သူက ဒီရောက်တာ တစ်နှစ်နီးနီးလောက် ရှိပြီတဲ့။ ရောက်ခါစက မြန်မာစကားကလွဲရင် ဘာမှ မတတ်တော့ တော်တော် အခက်အခဲ ဖြစ်တယ်ပေါ့။ ဆိုင်ရှင်တွေကလည်း အာရပ်လူမျိုးတွေဆိုတော့ ဟုတ်နေတယ်။ ဘာတွေ ပြောပြီး နေကြသလဲတော့မသိ။ အခုတော့ မလေးစကား ကောင်းကောင်းတတ်နေပြီ။ သူကမေးလို့ အစ်မရောက်နေတာ လေးနှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ အံ့ဩနေသေးတယ်။ သူက တစ်နှစ်နဲ့တောင် စိတ်ညစ်နေတာတဲ့။ အစ်မက လေးနှစ်ကို ဘယ်လိုနေလဲတဲ့။ ဪ.. ဘယ်နေရာမဆို ကိုယ့်အိမ်လောက်တော့ ဘယ်ကောင်းမလဲနော်။ တော်ရာမှာ နေတတ်သလိုဘဲ နေရတာပေါ့။
အစားအသောက်ငမ်းနေတာနဲ့ ဓါတ်ပုံလေးဘာလေး ရိုက်ခဲ့ဖို့ မေ့သွားတယ်။ side dish ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေပါတယ်။ (ကျမအတွက် ထူးဆန်းတာ။) ဘာ “ပဲ” တစ်ခုကို ကြိတ်ပြီး ရလာတဲ့ paste ဆိုလား။ စားလို့ တော်တော်ကောင်းတယ်။ ပြီးတော့ ထမင်းကို ဘာအရွက်တစ်ခုထဲလဲမသိဘူး ထည့်လိပ်ထားတာ။ အဲဒါတော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး။ ခရမ်းသီးကို paste လိုမျိုး လုပ်ထားတာတော့ စားလို့တော်တော်ကောင်းတယ်။ ပြီးတော့ ထုံးစံအတိုင်း Arab tea ဆိုပြီးသောက်ကြတယ်။ လက်ဖက်ရည် (အဖန်ရည်) ထဲမှာ သကြားနဲ့ ပူစီနံအရွက်ထည့်ပြီး သောက်ကြတာ။ သူတို့တော့ ဘာကို ကြိုက်သလဲမသိ။ ကျမတော့ ပူစီနံရဲ့ အနံ့ကို ခံစားလို့ကို မရဘူး။ Non-alcoholic beer ဆိုပြီးတော့လည်း ရောင်းသေးတယ်။ စပ်စုချင်တာနဲ့ သူများနားကနေ နည်းနည်းတောင်းမြည်းကြည့်တာ ချဉ်စုပ်စုပ်နဲ့ ဘာအရသာကြီးမှန်းကို မသိဘူး။
အဲ.. ပြီးတော့ ရှိရှာ လို့ခေါ်တဲ့ဟာကြီးတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ ပိုက်ကြီးတွေ။ အထဲမှာက ရေကို အပူပေးထားတယ်။ အပေါ်မှာ အမွေးနံသာအခဲကို တင်ပြီး အပူပေးတာဘဲ။ ဘာကို ရှူလိုက်ပြီး ဘာအရသာတွေ ရကြသလဲတော့ မသိပါဘူး။ မြင်ရတာနဲ့တောင် လန့်တယ်။ သူတို့ကတော့ အဲဒါကို ရှူရင် စိတ်ငြိမ်တယ်လို့ ဆင်ခြေပေးကြတယ်။ ကြာလာရင် ရီဝေဝေတော့ ဖြစ်လာနိုင်လောက်တာဘဲ။ ကြာရင် ဆေးလိပ်စွဲသလို စွဲသွားသလား မစွဲဘူးလားတော့ ကျမလည်း အသေအချာ မသိဘူး။ တစ်ခုကို ရင်းဂစ် ၁ဝ ဘဲဆိုတော့ ဈေးသိ်ပ်မများဘူး။ စတော်ဘယ်ရီ၊ စပျစ် စတဲ့စတဲ့ ကြိုက်တဲ့ flavor ရတယ်လို့ ပြောတာဘဲ။ အဲဒီ ရှိရှာ အကြောင်း စပ်စုထားတာတွေ ရှိသေးတယ်။ နောက်ပို့စ်တစ်ခု ဖြစ်အောင် ရေးဦးမယ်။ တကယ်ကို ထူးဆန်းထွေလာ သောင်းခြောက်ထောင် တွေ့ခဲ့ရတဲ့ တစ်နေ့ပါဘဲ။
Once uponaSaturday ပြီးတော့ once uponaSunday မှာ ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့ စနေနေ့မှာ သောင်းကျန်းထားတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို လက်ပြုတ်မတတ် လျှော်လိုက်ရတာပေါ့။
Couldn understand lah...tak faham...tolong...tolong...i already uploaded the images to my picasa album...i put the link on my blog..check it out.
12/4/08 4:03 PM
:) မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ ... နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင် အဆင်ပြေပါစေ ... :)
13/4/08 6:42 PM
I see Kl, cyberjaya, lamb fan and the title hasaSaturday. So was it the outing to makan2 arab food ?
dek>> heh heh.. so that i could gossip as much as i can when others couldn't understand.. :D tak boleh tolong la.. gotta wait till Google finish Burmest-English translation engine. ;-) mekasih4the pics..
ကိုစိုးထက်>> same to you.. ပျော်ရွှင်သော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ။
mohammed>> pandai la!! see.. it's not hard to understand, right?
14/4/08 12:24 PM
"မသဉ္ဖာ၏ စွန့်စားခန်းများ ဒုတိယမြောက်နေ့ " ကိုလာဖတ်ရင်း ရေပါလောင်းသွားတယ်ဗျ။ :)
ပျော်ရွှင်စရာနှစ်သစ်ကူး၊ မင်္ဂလာရှိသော သင်္ကြန်ဖြစ်ပါစေ!!
14/4/08 3:17 PM
Once UponaSaturday2ကိုဖတ်ရင်း ရေတစ်ဗုံးလုံးလာလောင်းသွားတယ် အစ်မရေ။
အေးချမ်းတဲ့ နှစ်သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။ :D
15/4/08 1:29 AM
နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
17/4/08 12:31 AM
စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ စားချင်တယ်။ ကျွေးလို့မရဘူးဆိုရင်တောင် ဓါတ်ပုံလေးရိုက်တင်ပေးပါ..တောင်းဆိုပါတယ်...နော် တီတီ..:P
နှစ်သစ်မှာ နေကောင်း ကျန်းမာ ချမ်းသာ ထီပေါက် ပါစေသော်....
17/4/08 8:54 PM
mbl0gger>> haha.. ပြောလည်း ပြောတတ်တယ်။ စွန့်စားခန်း ဒုတိယပိုင်းတဲ့။ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင် ပါစေ။
winkabar>> ရေဗုံးက ဘယ်လောက်ကြီးလဲဟင်။ အေးချမ်းတဲ့ နှစ်သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေဆိုတော့ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ။ မဟုတ်ရင် ဒီမှာ ပူလွန်းလို့။
ကိုပီတိ>> ပျော်ရွှင်သော နှစ်သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
နေလင်း>> ဘယ်ကို ပျောက်ပြီး ဘယ်ကနေ ပြန်ရောက်လာတာလဲဟင်။ တီတီ..တီတီ နဲ့ ကားဟွန်းတီးသံ မကြားရတာ ကြာပြီ။ ထီပေါက်ရင် မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ် =)
စနေမှာစားတဲ့ အစားအသောက်ကြောင့် တနင်္ဂနွေမှာ ပန်းကမ္ဘာများ ရောက်ပြီလားလို့ :P
23/4/08 11:48 AM
cms>> ကံကောင်းလို့ပေါ့ :P
25/4/08 11:51 AM
2/5/08 10:57 PM
မလေးမ>> ဟိဟိ.. ဘာမှန်းမသိတာတွေကိုဘဲ စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်။
23/5/08 12:12 PM
HANDPHONE GOT STOLEN